Home » » Expression of Interest
ဆုံမှတ်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့် ပြန်လည်သွားရောက်လိုသူများ ဖြည့်စွက်ရမည့် ပုံစံ
Registration form for Expression of interest (Relief Flight to Myanmar)
ကျွန်တော်/ ကျွန်မသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဆုံမှတ်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် အထူးလေယာဉ် (Relief Flight) အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။
ကျွန်တော်/ ကျွန်မအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အခါ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကြောင်း အထောက်အထားပြသနိုင်ပါက Community Based Facility Quarantine / သတ်မှတ်ထားသည့် Hotel Quarantine တွင် (၇) ရက် နေထိုင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးပါက Community Based Facility Quarantine/ သတ်မှတ်ထားသည့် Hotel Quarantine တွင် (၁၀) ရက် နေထိုင်ရန် လိုအပ်မည်ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ပါသည်။
I hereby declare that I have arrived in the United States and I wish to return to Myanmar with the Relief Flight program via the focal destination country.
I acknowledge that I will be required to stay in the mandatory community based facility quarantine / designated hotel quarantine for (7) days if I can present the COVID-19 vaccination card upon arrival in Myanmar. If I am not vaccinated, I will be required to stay in the mandatory community based facility quarantine/ designated hotel quarantine for (10) days upon arrival in Myanmar.
ဤပုံစံနှင့်အတူ လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (ဓာတ်ပုံပါစာမျက်နှာ)၊ အမေရိကန် ပြည်ဝင်ဗီဇာ၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါက Green Card ၊ ဆိုက်ရောက်ပြည်ဝင်ဗီဇာ ၊ endorsement ပါရှိသည့် စာမျက်နှာတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။
Please make sure to submit scanned copies of >>>> (1) Passport photo page (2) US / Myanmar visa (3) Arrival stamp to US (Immigration) (4) Green card copy if applicable.
Once you have all the information ready, please proceed >>>>>> to online registration form.
It best works with desktop PC or laptops.